ငါသည်အခြားအတိုကောက်ကိုကြည့်ခြင်းသို့မဟုတ်သင်ယူခြင်းသည်အပတ်တိုင်းဖြစ်သည်။ ငါသူတို့ထဲကတက်ကြွစာရင်းကိုစောင့်ရှောက်သွားမယ့်! အဘို့အအက္ခရာကနေတဆင့်ခုန်ဖို့အခမဲ့ခံစားရသည် အရောင်းအတိုကောက်, စျေးကွက်အတိုကောက်ဒါမှမဟုတ် အရောင်းနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းပညာအတိုကောက် သင်ရှာနေသည် -
2FA - two-factor authentication- သုံးစွဲသူအမည်နှင့်စကားဝှက်တို့ထက်ကျော်။ အွန်လိုင်းအကောင့်များ၏လုံခြုံရေးကိုသေချာစေရန်အသုံးပြုသောအကာအကွယ်အပိုတစ်ခု။ အသုံးပြုသူသည်စကားဝှက်ကိုရိုက်ထည့်ပြီးသောအခါဒုတိယစာမေးပွဲအဆင့်ကိုရိုက်ရန်လိုအပ်သည်၊ တစ်ခါတစ်ရံစာသားမက်ဆေ့ခ်ျ၊ အီးမေးလ်သို့မဟုတ်စစ်မှန်ကြောင်းအထောက်အထားပြသခြင်းမှတစ်ဆင့်ပေးပို့သောကုဒ်ကိုတုန့်ပြန်သည်။
4P - ကုန်ပစ္စည်း, စျေး, နေရာ, အရောင်းမြှင့်တင်ရေး: 4P စျေးကွက်ရှာဖွေရေးပုံစံသည်သင်ရောင်းနေသောကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှု၊ သင်မည်မျှကောက်ခံပြီးတန်ဖိုး၊ တန်ဖိုးမြှင့်တင်ရန်လိုအပ်သည့်နေရာနှင့်မည်ကဲ့သို့မြှင့်တင်မည်ကိုလွှမ်းခြုံထားသည်။
ABC ရုပ်သံ - အမြဲတမ်းပိတ်ပါဖြေ - ဒါကအရောင်းကိုယ်စားလှယ်တစ်ယောက်အနေနဲ့သင်ပထမဆုံးသင်ယူသင့်တဲ့အရောင်းအတိုကောက်စာရင်းပါ။ ဒါဟာတော်တော်လေးအလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ထိရောက်သောအရောင်းဝန်ထမ်းဖြစ်ရန် ABC သို့လိုအပ်သည်။
API - Application Programming Interfaceဖြေ - မတူညီတဲ့စနစ်တွေအချင်းချင်းတစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်စကားပြောဖို့နည်းလမ်း။ သူတို့အချင်းချင်းဆက်သွယ်နိုင်အောင်တောင်းဆိုမှုများနှင့်တုံ့ပြန်မှုများကိုပုံစံချထားသည်။ browser တစ်ခုသည် HTTP တောင်းဆိုမှုတစ်ခုပြုလုပ်ပြီး HTML ကိုပြန်ပို့သကဲ့သို့ APIs များသည် HTTP တောင်းဆိုမှုတစ်ခုဖြင့်တောင်းဆိုပြီး XML သို့မဟုတ် JSON သို့ပြန်သွားသည်။
AR - လုပ်ခဲ့ပြီး Reality: အသုံးပြုသူအစစ်အမှန်ကမ္ဘာ၏အသုံးပြုသူအမြင်အပေါ်ကွန်ပျူတာဖြင့်ထုတ်လုပ်သောကို virtual အတွေ့အကြုံကို superimposes, ဒါကြောင့်ပေါင်းစပ်အမြင်ပေးနည်းပညာတစ်ခု။
ASO - App Store Optimizationသင်၏မိုဘိုင်းအပလီကေးရှင်းကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာအဆင့်သတ်မှတ်ရန်နှင့် App Store မှရှာဖွေမှုရလဒ်များအတွင်း၎င်း၏အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုကူညီရန်အတွက်အသုံးချသည့်နည်းဗျူဟာ၊ ကိရိယာများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်နည်းပညာများကိုပေါင်းစပ်ထားသည်။
AWS - အမေဇုံက Web Services က: အမေဇုံ၏ဝဘ်ဝန်ဆောင်မှုတွင်နည်းပညာ၊ စက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့်စျေးနှုန်းအမျိုးမျိုးအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုပေါင်း ၁၇၅ ခုကျော်ရှိသည်။
B2B2C - စီးပွားရေးမှစားသုံးသူသို့စီးပွားရေးကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းအတွက် B2B နှင့် B2C တို့ကိုပေါင်းစပ်ထားသော e-commerce မော်ဒယ်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုသည်ကုန်ပစ္စည်း၊ ဖြေရှင်းချက် (သို့) ၀ န်ဆောင်မှုကိုတီထွင်ပြီးအခြားစီးပွားရေး၏နောက်ဆုံးအသုံးပြုသူများအားပေးသည်။
BANT - ဘတ်ဂျက်အာဏာပိုင်အဖွဲ့သည်အချိန်ဇယားလိုအပ်သည်: ၎င်းသည်အလားအလာရှိရောင်းရန်အချိန်ကောင်းလားဆိုသည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်အသုံးပြုသည့်ပုံသေနည်းဖြစ်သည်။
CTA - လှုပ်ရှားမှုမှ Callအကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေး၏ရည်ရွယ်ချက်မှာစာဖတ်သူများအားအသိပေးရန်၊ ပညာပေးရန်သို့မဟုတ်ဖျော်ဖြေရန်ဖြစ်သည်၊ သို့သော်နောက်ဆုံးတွင်မည်သည့်အကြောင်းအရာမဆို၏ရည်မှန်းချက်မှာစာဖတ်သူများကိုသူတို့ဖတ်ထားသောအကြောင်းအရာအပေါ်အရေးယူဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်သည်။ CTA သည်စာဖတ်သူကိုအဖြစ်အပျက်တစ်ခုကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ခြင်း၊ ခေါ်ခြင်း၊ မှတ်ပုံတင်ခြင်း (သို့) တက်ရောက်ခြင်းအားဖြင့်လုပ်ဆောင်ရန်တွန်းအားပေးသည့်ချိတ်ဆက်မှု၊ ခလုတ်၊ ပုံသို့မဟုတ်ဝက်ဘ်ချိတ်ဆက်တစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။
DXP - ဒစ်ဂျစ်တယ်အတွေ့အကြုံပလက်ဖောင်း: ဒီဂျစ်တယ်အသွင်ပြောင်းမှုအတွက်လုပ်ငန်းဆော့ဖ်ဝဲသည်သုံးစွဲသူ၏အတွေ့အကြုံကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်အာရုံစိုက်သည်။ ဤရွေ့ကားပလက်ဖောင်းတစ်ခုတည်းထုတ်ကုန်ဖြစ်နိုင်ပေမယ့်မကြာခဏဒီဂျစ်တယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစစ်ဆင်ရေးနှင့်ချိတ်ဆက်ဖောက်သည်အတွေ့အကြုံများကိုထည့်သွင်းထုတ်ကုန်များအစုံဖြစ်ကြသည်။ ဗဟိုမှဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုဖြင့်သူတို့သည်ဖောက်သည်များ၏အတွေ့အကြုံအပေါ်အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုများကိုပံ့ပိုးပေးသည်။
FAB - ထူးခြားချက်များ၊ ကောင်းကျိုးများဖြေ - နောက်ထပ်အရောင်းအ ၀ ယ်အတိုကောက်နောက်တစ်ခုကတော့အရောင်းအဖွဲ့ ၀ င်တွေကို ၀ ယ်သူတွေကသူတို့ရောင်းတဲ့အရာတွေထက်သူတို့ရဲ့ကုန်ပစ္စည်း (သို့) ၀ န်ဆောင်မှုကနေရရှိမယ့်အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုအာရုံစိုက်ဖို့သတိပေးတယ်။
FKP - Facial Keypoints: လူတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်ထူးခြားသောမျက်နှာအမှတ်အသားတစ်ခုဖန်တီးရန်နှာခေါင်း၊ မျက်လုံးများနှင့်ပါးစပ်များပတ်ပတ်လည်တွင်နေရာချလေ့ရှိသည်။
GAID - Google Advertising IDAndroid ဖုန်းကိုခြေရာခံရန်ကြော်ငြာရှင်များကိုပေးသောထူးခြားသောကျပန်းအမှတ်အသား။ အသုံးပြုသူများသည်သူတို့၏ Device များ၏ GAID များကို reset လုပ်နိူင်ပြီး ၄ င်းတို့ရဲ့ devices တွေကို tracking မှဖယ်ထုတ်ဖို့ disable လုပ်နိူင်တယ်။
IDFA - ကြော်ငြာရှင်များအတွက်အမှတ်အသား: ဆိုသည်မှာ Apple မှအသုံးပြုသူ၏စက်တွင်သတ်မှတ်ထားသောကျပန်းကိရိယာအမှတ်အသားဖြစ်သည်။ ကြော်ငြာရှင်များကအချက်အလက်များကိုခြေရာခံရန်ဒီဟာကိုသုံးပြီး၎င်းတို့သည်စိတ်ကြိုက်ကြော်ငြာများပေးပို့နိုင်သည်။ iOS 14 နဲ့အတူဒီဟာကိုပုံမှန်အားဖြင့်မဟုတ်ဘဲ opt-in တောင်းဆိုချက်ကနေတဆင့်လုပ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။
အိမ်ဖော် - မိုဘိုင်းကြော်ငြာ ID or မိုဘိုင်းကြော်ငြာ IDအသုံးပြုသူအတွက်သီးသန့်ပြန်လည်နေရာချထားနိုင်သောအမည်မသိအမှတ်အသားပြုသူ၏စမတ်ဖုန်းကိရိယာနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိပြီး၎င်းတို့၏မိုဘိုင်းလည်ပတ်မှုစနစ်ကထောက်ပံ့သည်။ developer များနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေသူများသည်သူတို့၏ app ကိုမည်သူအသုံးပြုနေသည်ကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ရန် MAIDs ကကူညီသည်။
MRM - စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲမှု: ၎င်း၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအရင်းအမြစ်များကို orchestrate, တိုင်းတာနှင့်ပိုကောင်းအောင်ကုမ္ပဏီ၏စွမ်းရည်ကိုတိုးတက်စေရန်အသုံးပြုသောပလက်ဖောင်းများ။ ၎င်းတွင်လူသားနှင့်ပလက်ဖောင်းနှင့်ဆက်စပ်သောအရင်းအမြစ်များပါ ၀ င်သည်
ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဖြေ - PR ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကမင်းရဲ့စီးပွားရေးကိုလွတ်လပ်စွာအာရုံစိုက်ဖို့ဖြစ်တယ်။ ၎င်းသည်သင်၏စီးပွားရေးကိုအသစ်အဆန်း။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီးတိုက်ရိုက်ရောင်းရန်နည်းဗျူဟာမဟုတ်သည့်နည်းဖြင့်သင့်စီးပွားရေးကိုတင်ပြသည်။
QOE - အတွေ့အကြုံ၏အရည်အသွေး: အတွေ့အကြုံအရည်အသွေးသည် ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုနှင့်အတူဖောက်သည်၏အတွေ့အကြုံများကိုမွေ့လျော်ခြင်းသို့မဟုတ်စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသည့်အတိုင်းအတာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဗီဒီယိုအတွက်အထူး QoE ၏အရည်အသွေးကဆုံးဖြတ်တာဖြစ်ပါတယ် ဗီဒီယို အသုံးပြုသူစက်သို့လွှင့်ထုတ်သည်, နှင့် အဆိုပါပြသသည့်အခါပြန်ဖွင့်များ၏အရည်အသွေး ဗီဒီယို အသုံးပြုသူစက်ပေါ်တွင်။
SDK - Software Developer Kit: developer များအနေဖြင့်ခေါင်းအစပြုရန်ကုမ္ပဏီများသည် developer ရေးသားနေသည့်ပရောဂျက်များတွင် class သို့မဟုတ်လိုအပ်သော function များကိုထည့်သွင်းရန် package တစ်ခုကိုမကြာခဏထုတ်ဝေလေ့ရှိသည်။
SFA - Salesforce Automationအရောင်းလှုပ်ရှားမှုများကိုအလိုအလျောက်ပြုလုပ်သောဆော့ဖ်ဝဲများအတွက်အရောင်းအတိုကောက်၊ အရောင်း၊ ဖောက်သည်များ၏တုံ့ပြန်မှုကိုခြေရာခံခြင်း၊
အသေးစားနှင့်အလတ်စား - ဘာသာရပ်ကိစ္စကျွမ်းကျင်သူသင်၏ ၀ ယ်ယူသူဆက်သွယ်ရေးကိုတိုးတက်စေရန်အတွက်အရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြစ်သည့်သီးခြားနယ်မြေတစ်ခုသို့မဟုတ်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုမှအခွင့်အာဏာ။ စျေးကွက်သမားများအတွက်အလားအလာရှိသောဖောက်သည်များ၊ အဓိကဖောက်သည်များ၊ အရောင်းကိုယ်စားလှယ်များနှင့်ဖောက်သည် ၀ န်ဆောင်မှုကိုယ်စားလှယ်များသည်များသောအားဖြင့်အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင်အရေးပါသောသွင်းအားစုများဖြစ်သည်။
လှည့်ဖျား - အခြေအနေ, ပြProbleနာ, ဆိုလို, လိုအပ်ပါတယ်ဖြေ - အရောင်းအ ၀ ယ်တစ်ခု“ နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်းနှင့်ကယ်တင်ခြင်း” နည်းလမ်း။ အလားအလာရှိသောအကျိုးဆက်များကိုတိုးမြှင့်ခြင်းအားဖြင့်သင်သည်အလားအလာ၏နာကျင်မှုအချက်များကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပြီး၎င်းတို့ကို“ နာကျင်စေ” သည်။ ထိုအခါသင်သည်သင်၏ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူ "ကယ်ဆယ်ရေး" ထံသို့လာကြ၏
TTFB - ပထမ ဦး ဆုံး Byte ဖို့အချိန်: အသုံးပြုသူ (သို့) client မှ HTTP တောင်းခံမှုပြုလုပ်သောသုံးစွဲသူသို့မဟုတ် browser မှကြာချိန်ကိုတိုင်းတာသော ၀ က်ဘ်ဆာဗာသို့မဟုတ်ကွန်ယက်အရင်းအမြစ်၏တုန့်ပြန်မှုသည်ညွှန်ပြချက်၏သုံးစွဲသူ browser (သို့) ကုဒ်နံပါတ်မှလက်ခံရရှိထားသောစာမျက်နှာ၏ပထမ ဦး ဆုံး byte သို့ API ကို).
URL - ယူနီဖောင်းအရင်းအမြစ်တည်နေရာ: ကွန်ရက်လိပ်စာဟုလည်းလူသိများသောကွန်ယက်ပေါ်ရှိတည်နေရာနှင့်၎င်းကိုပြန်လည်ရယူရန်ယန္တရားကိုသတ်မှတ်ထားသောဝဘ်ရင်းမြစ်ဖြစ်သည်။
USP - ထူးခြားတဲ့ရောင်းအားစီမံခ: ဒါ့အပြင်တစ် ဦး အဖြစ်လူသိများ ထူးခြားတဲ့အရောင်းရဆုံးအချက်သင်၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုရွေးရန်သို့မဟုတ်သင်၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်သို့ပြောင်းလဲရန်ဖောက်သည်များအားထူးခြားသောအဆိုပြုချက်များပြုလုပ်ရန်အတွက်စျေးကွက်မဟာဗျူဟာဖြစ်သည်။
UX - အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံ၀ ယ်ယူစဉ်ကာလအတွင်းဖောက်သည်တစ် ဦး သည်သင့်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှု။ ၀ ယ်သူ၏အတွေ့အကြုံသည်သင်၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အပေါ်ဝယ်ယူသူအပေါ်ထားရှိမှုအပေါ်လွှမ်းမိုးမှုရှိသည်။ အပြုသဘောဆောင်သောအတွေ့အကြုံသည်အလားအလာရှိသော ၀ ယ်သူများကိုဖောက်သည်များအဖြစ်ပြောင်းလဲပေးပြီးလက်ရှိဖောက်သည်များအားသစ္စာစောင့်သိစေသည်။